LIVE-ACTION DRAGON BALL Z TV SHOW သည် DISNEY PLUS သို့လာမည် - တီဗီ
Live-Action Dragon Ball Z TV Show သည် Disney Plus သို့လာမည်
Dragon Ball Z ပရိသတ်များသည်မကြာမီက Disney ၏ streaming ၀ န်ဆောင်မှုတွင်လူတို့၏ပုံဖော်ထားသောဂန္ထဝင် shonen manga နှင့် anime ကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
နောက်အခန်းတွင်သင်စိုးရိမ်ပူပန်နေသလား နဂါးဘောလုံးစူပါ manga? 2018 Broly ရုပ်ရှင်နောက်ဆက်တွဲကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ကြေညာမည်နည်းနှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်စိတ်ဝင်စားမည်နည်း။ သငျသညျအိမျမှာဖမ်းမိတယ်ရဲ့ဖြစ်ပွားနေသော COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ၏ချမ်း, အထီးကျန်ကြောက်ကိုပယ်သင့်ရဲ့စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဒွါဒသမအချိန်အဘို့တဖန်နောက်တဖန်တစ်ခုလုံးကို binging ပါသလား?
နေပါစေဘယ်လောက်သင့်ရဲ့ နဂါးဘောလုံး fandom ကိုယ်နှိုက်ကသရုပ်ပြ, သင်တစ် ဦး တိုက်ရိုက် -action ကိုလိုက်လျောညီထွေကြောင်းသိ။ စိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မယ် Dragon Ball Z မကြာမီဒစ္စနေး Plus အားလာမယ့်လိမ့်မည်။ WGTC နှင့်နီးစပ်သောအရင်းအမြစ်များ - ယင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြခဲ့သူများဖြစ်သည် သူမသည် - Hulk Ms. Marvel ပွဲများကိုစင်မြင့်သို့ ဦး တည်ခဲ့ပြီး Mouse House သည်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုပြုလုပ်နေသည် Bambi နှင့် ရော်ဘင်ဟုဒ် စီမံကိန်းအားလုံးသည်အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် Saiyans အားလုံး၏မင်းသား Vegeta ကိုအဓိကအာရုံစိုက်လိမ့်မည်ဟုဆိုကြသည်။
ရသည်မှာကသို့ချည်နှောင်ပါလိမ့်မယ် ဒစ္စနေးအဖြစ်ကောင်းစွာအပေါ်အလုပ်လုပ်သော live-action ကိုရုပ်ရှင် , စီးရီးနှင့်အတူအမြိုးမြိုး၏ spinoff ဖြစ်နှင့်ပထမနှင့်ဒုတိယရုပ်ရှင်အကြားနေရာတစ်နေရာယူပါ။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုယခုအစောပိုင်းတွင်မသိရသေးသော်လည်းစတူဒီယိုတွင်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်ကြီးမားသောအစီအစဉ်များရှိနေသည်မှာသေချာသည်။
ပရိသတ်အတော်များများသည် Akira Toriyama ၏ဒဏ္legာရီဇာတ်လမ်းတွဲများကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် box office ၀ န်ကြီးချုပ်ဗုံးဖြင့်မီးရှို့ပြီးနောက် Live-action ကုသမှုရရှိမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ Dragonball ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၊ အခြားရုပ်ရှင်များသည်ဂန္ထဝင် shonen manga နှင့် anime စီးရီးတို့၏ထူးခြားသောမှုတ်သွင်းခံအမြင်အာရုံစတိုင်များကိုဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့ Stephen Chow ရဲ့ရရှိပါသည် Kung-Fu Hustle, Edgar Wright ရဲ့ ဖြစ်သူ Scott Pilgrim vs. နှင့် Zack Snyder ရဲ့ သံမဏိလူသား ဥပမာအနည်းငယ်ကိုသာဖော်ပြပါရန်။
ဤအဆိုပြုထားသောအင်္ဂါရပ်၏အသွင်အပြင်နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမျှမသိသေးသော်လည်းယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောဂုဏ်သတင်းကိုပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်လိမ့်မည် နဂါးဘောလုံး အထက်ဖော်ပြပါရုပ်ရှင်နှင့်ဆင်တူသည့်စတိုင်ဖြင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ရုပ်ရှင်ရုံတွင်။ ဒစ္စနေးသည်မည်သည့်လမ်းကြောင်းဖြင့်စတင်မည်ဆိုသည့်အချက်ကိုစတင်စဉ်းစားရန်စောလွန်းသေးသည်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သေချာပြောနိုင်သည်မှာသူတို့သည်ရုပ်ရှင်စီးရီးအသစ်ကိုသူတို့၏ streaming platform ပေါ်တွင် live-action show နှင့်အတူဖြည့်စွက်ရန်စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်သည်၊ နှင့်မကြာမီကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူအဖြစ်ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအကြောင်းကြားရန်သေချာပါလိမ့်မယ်။
Will Smith အနက်ရောင်ထဲမှာအသစ်သောယောက်ျား၌တည်ရှိ၏
jessica အသက်ပင်၏ chastain